Inona no The Best Chocolate Stores In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Inona no The Best Chocolate Stores In Eoropa
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 25/01/2021)
Ny kaontinanta Eoropeana dia be fanta-daza noho ny mahatalanjona sy matsiro sokola. Raha ny tena izy, chocoholics maro izay tia mandeha milaza fa izy ireo dia nanana fahafahana miavaka ny sasany hanandrana tsirony nandritra ny diany. Raha toa ianao ka manao ny làlanao amin'ny alalan'ny Eoropa sy mankafy sokola, manana vaovao lehibe ho anareo! Save A Train nijery ny Eoropeana sôkôla toerana ary atambatra ny lisitry ny 10 tsara indrindra sôkôla fivarotana any Eoropa. Tokony hahita ny tenanao amin'ny anankiray amin'ireo firenena, ary hahazo maniry ho sasany mahavariana sokola, maka fotoana mba hitsidika ny iray amin'ireo toerana. Tsy ho diso fanantenana.
1. Best Chocolate Stores In Paris – Debauve sy Gallais
Frantsa no eo amin'ny laharana firenena be indrindra noho ny sôkôla. Ianao Azo antoka fa mahita be dia be ny sôkôla fivarotana raha manao ny lalana eny an-dalamben'i an-drenivohitra. Raha ny tena izy, mety ho tototry ny sokola ny isan'ny fivarotana ianao tojo. Mba ho azo antoka ianareo hiaina ny tsara indrindra dia manana ny tolotra Paris, Nangataka izahay tsy maintsy manodidina ny fitsidihana sôkôla fivarotana any Paris. Maro no namaly fa tsy maintsy ho Debauve sy Gallais. Io fivarotana dia tsy mahafinaritra ihany ny tranainy indrindra tao an-tanàna, fa mba ho mahazatra. Ary novohana tany amin'ny 1800s ary namorona matsiro sokola ho mandrakizay ny vahoaka hatramin'ny. Raha ny tena izy, dia lehibe tokoa no izy rehefa nanokatra izy ireo fa lasa mpamatsy ny sôkôla ho an'ny Fitsarana sy ny Frantsay Napoleon. Maro ny lehibe mpitarika Zavatra nahafinaritra ny sôkôla, ary toy izany koa no azonao.
Raha ny Italia, lafiny maro Viziovirtù toy ny tsy maintsy-toerana ho an'ny sokola fitsidihana tia. Ny fivarotana malaza no misy ao afovoan-tanànan'i Venise sady toy ny chocoholics manonofy. Ny zava-drehetra ao an-tsena dia tanana ny tsara indrindra misy fangaro. Manolotra fifangaroana tonga lafatra amin'ny tsiro tsy mampino sy ny rivo-piainana Venetiana mahafinaritra izy ireo. Raha ny tena izy, ny filozofia manodidina ny sokola dia mahavariana. Fomba nentim-paharazana izy ireo manaraka ny zava-drehetra sy ny asa tanana amin'ny tanana. Mitambatra izany afa-tsy ny tsara indrindra fangaro, ary manana toerana tsy maintsy tsidihina eo afovoan'i Venise ianao.
Ny Pays-Bas dia matetika tsy ny toerana voalohany izay tonga ao an-tsaina rehefa mieritreritra ny sôkôla. Na izany aza, dia mbola toerana lehibe mba hanandrana ny sasany amin'ireo tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao sôkôla. Ny iray amin'ireo toeram-pivarotana malaza indrindra any Amsterdam. Vanroselen dia toerana tsy maintsy tsidihana ho an'izay mitady hanandrana sôkôla manerantany. Ny zava-drehetra ao amin'ny fivarotana dia tanana, fanakambanana sôkôla amin'ny voankazo sy ny anana isan-karazany mba hamoronana tsy manam-paharoa sy ny vava fisotroan treats.
Raha toa ianao ka mandeha amin'ny alalan'ny Luxembourg, ho azo antoka ny fijanonana ity fivarotana sokola mahafinaritra izay lasa maneran-tany anarana. Na izany aza, tany am-boalohany dia ny Chocolate House ny Luxembourg no misy tandrifin'ny Ducal Grand Palace, ary dia an-trano ny sasany amin'ireo tsara indrindra sôkôla famoronana eto amin'izao tontolo izao. Any akaikin'ny fianakavian'ny mpanjaka, dia afaka mahazo antoka izy ireo ihany no manome ny tsara indrindra. Ankafizo ny any an-danitra traikefa amin'ny sasany ny tsirony tsara indrindra ao amin'ny tontolo izao.
5. Best Chocolate Stores In Vienne – Xocolat Manufaktur
Raha toa ve ianao maka hoe nandeha ny alalan 'ny mpanankarena ny Hietzing distrika any Vienne, hamangy Xocolat Manufaktur. Ao amin'io fivarotana mahafinaritra, dia afaka mahita ny sasany amin'ireo tsara indrindra tany Eoropa sôkôla. Aseho amin'ny fitaratra casing mba ho hitan'ny rehetra, ianao dia afaka mahita ny sasany amin'ireo tena voadio karazana sokola ao amin'ny firenena. Afaka mandeha any mba hankafy ny sokola na hanatrika ny atrikasa ary mianatra kely momba ny fahaiza-manao sôkôla.
Raha mitady ny fivarotana izay manan-karena amin'ny tantara ary ny fanandramana, dia mijery intsony noho ny Erich Hamann in West Berlin. Zavatra roa manao fivarotana ity miavaka. Voalohany, dia ny mahavariana tantaran 'ny fivarotana mihitsy. Izany vanim indray 1928, ary izany dia hita ao amin'ny fomba Bauhaus trano izay maty ny Ady Lehibe II. Faharoa, dia ny voninahitry ny fomban-drazana sy ny lehibe tsiro. Izy ireo tany am-boalohany mbola manana ny fomba fahandro avy amin'ny fivarotana sy ny fitiavana fanokafana hifantoka amin'ny maizina sokola. Na izany aza, mihitsy aza izy ireo manolotra fotsy sôkôla sy ny tsirony hafa isan-karazany. Ny sôkôla hodi-kazo dia ny resaka ao an-tanàna, ka ho azo antoka ny hanandrana izany raha mitsidika ny trano fivarotana.
7. Best Chocolate Stores In Bruges – The Chocolate-dalana,
Belzika no eo amin'ny tsara indrindra raha ny amin'ny fahaiza-famoronana sôkôla. Mandeha amin'ny alalan'ny Belzika tanàna, ho hitanao matsiro be dia be ny sombintsombin-javatra eo amin'ny miseho. Ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra mba mahafinaritra sokola dia The Chocolate-dalana, in Bruges. Ny fivarotana dia tsy maintsy fitsidihana ho an'ny olona izay tia ny tsara tapa-sokola. Misy be dia be ny nentin-drazana tsirony sy be dia be mahafinaritra sy fanandramana sôkôla azo isafidianana. Inona no mahatonga ny Chocolate-dalana, miavaka dia ny dingana fanaovana ny sôkôla. Manao sôkôla mahitsy avy amin'ny tsaramaso ary fitaovana manokana ho an'ny mitoto vary sy ny fampifangaroana ny sôkôla. Amin'ny manaraka ianao in Bruges, maka fotoana mba mankafy ny tsirony sy ny tsara tarehy mahavariana traikefa amin'ny The Chocolate-dalana,.
Soisa no nalaza noho ny sôkôla. Raha ny tena izy, dia afaka milaza ronono sokola ho Soisa. Rehefa mahazo ny firenena, dia ho tsikaritrao fa ny sokola dia na aiza na aiza. Saika toerana rehetra alehanao dia feno fivarotana sokola manolotra ny manaikitra hihinana. Raha te-hiaina ny tsara indrindra dia manana ny tolotra Soisa, maro no manaiky fa Max Chocolatier ny toerana tonga lafatra mba hitsidika. Izy io dia toerana tena an-toerana, ary noho ny antony tsara. Mampiasa ambony kalitao sakafo sy mamokatra ny sasany amin'ireo tsara indrindra sôkôla tany Soisa. Manana ihany koa izy ireo manam-paharoa, fizaran-taona efatra X-SAMPA tsy izay mahatonga vanim-potoana sokola tsirony. Raha fintinina, dia afaka miaina isan-karazany tiany, arakaraka rehefa mitsidika ny trano fivarotana.
Zurich ho Lucerne Lamasinina
Bern ny Lucerne Lamasinina
Geneva ho Lucerne Lamasinina
Konstanz ho Lucerne Lamasinina
Hongria dia miafina vatosoa ho an'ny chocoholics. Manao isan-karazany mahavariana tsindrin-tsakafo, ary ny sôkôla dia miavaka. Ny tsy maintsy hitsidika ny hankafy mahavariana sokola dia Chocolate Rozsavolgyi in Budapest. Manome be dia be ny mamy treats sy, tena zava-dehibe, mahagaga sôkôla famoronana. Ny sôkôla nahatratra laza iraisam-pirenena ny sôkôla bonbons, ary rehefa fizahan-toetra, dia mazava ny antony. ny manan-karena, aesthetically mahafinaritra ny sombintsombin-javatra ireo any an-danitra. Ajanony ny raha nandeha mba Budapest.
Farany eo amin'ny lisitra 10 Best Chocolate Stores In Eoropa no Sprungli. Raha mitady toerana izay mihitsy no kilasika Soisa hevitra ny sôkôla, mijery intsony noho ny Sprungli in Zurich. Ny tsena dia nisokatra tao 1859 ary nataony mahagaga, handcrafted sôkôla hatramin'ny famoronana. Raha te-hiaina sokola be vokatra avy amin'ny tsara indrindra ny fangaro, fitsidihana Sprungli.
Raha fintinina, Eoropa dia mahafinaritra toerana ho an'ny olona iray izay mitady ny tsara indrindra sy ny tsara indrindra sôkôla sokola fivarotana na choco fotsiny mpankafy.
Moa ve ianao vonona ny hiaina ny chocoholics paradisa mandritra ny diany manaraka amin'ny alalan'ny Eoropa? Boky A Train Ticket ny irina toerana sy hanandrana ireo rehetra atolotra.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Best Chocolate Stores In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chocolate-stores-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#candyshop #fivarotana sôkôla europetravel Tendan-kanina